Xiaomi Mi 8X maka asambodo 3C, ụdị atọ pụtara | Androidsis
Xiaomi nọ na mgbasa ozi n'izu ndị na -adịbeghị anya n'ihi ọtụtụ asịrị na ịkọ nkọ banyere ngwaọrụ ya dị iche iche, otu n'ime ihe a na -ekwukarị bụ Xiaomi Mi 8X, ekwentị mkpanaaka nke edepụtara ụbọchị ole na ole gara aga na webụsaịtị gọọmentị nke onye nrụpụta n'okpuru nọmba nlereanya M1808D2TE na A hụrụ ya na ezigbo onyonyo yana ntụgharị abụọ.
Ugbu a, otu ụdị ahụ pụtara na webụsaịtị asambodo 3C nke China, nke na -atụpụta mwepụta ngwa ngwa, enwere ike ịnwe Mi 8 na Mi 8 SE.
Ndepụta dị na webụsaịtị 3C anaghị ekpughe ọtụtụ ihe belụsọ nọmba nlereanya ngwaọrụ atọ yiri ya, nke nwere ike ikwughachi asịrị nke ụdị atọ ahụ.
Dika nchapu gara aga, Mi 8X ga -enwe Qualcomm Snapdragon 710 processor na batrị 3100 mAh kachasị maka ọtụtụ awa nke nnwere onwe. Nsụgharị ndị pụtara na Weibo na mbụ kwukwara na ihe mejupụtara oghere anya abụọ kwụ ọtọ.
Otu asịrị ahụ na -agwa anyị na ngwaọrụ ahụ ga -ewepụ ihe mmetụta mkpịsị aka ọdịnala na azụ ka gụnye ihe mmetụta etinyere na ihuenyo, nke a ga-abụ ihe na-aga n'ihu n'etiti etiti Xiaomi. N'ikpeazụ, enwere ike ịhụ ngwaọrụ ahụ na -acha ọcha na acha anụnụ anụnụ nwere ngwụcha na -egbu maramara.
Dị ka i si hụ, Xiaomi ga -etinye Mi 8X n'elu usoro Mi 8, ala ga -abụ Mi 8 ma na njedebe ọnụ ala, Mi 8 SE. N'ezie, ndị a bụ asịrị na anyị enweghị ihe doro anya ruo mgbe ụlọ ọrụ wepụtara ozi gọọmentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi Mi 8X maka asambodo 3C, ụdị atọ dị iche iche na-apụta